Wasaaradda Qorsheynta oo Soo Bandhigtey Qiyaasta Tirakoobka Dadka Soomaaliya Ku Nool – Goobjoog News
Wasaaradda Qorsheynta oo Soo Bandhigtey Qiyaasta Tirakoobka Dadka Soomaaliya Ku Nool
Wasaaradda qorsheynta qaranka oo kaashanaysa hey’adda tirakoobyada Qaramada midoobey ayaa soo bandhigtey qiyaasta tirakoobka dadka ku nool Soomaaliya.
Goobtii warbixinta lagu soo bandhigayay waxaa joogey Ra’isulwasaare ku xigeenka Maxamed Cumar Carte Qaalib iyo wasiirka qorsheynta qaranka Cabdiraxmaan Ceynte, waxaana warbixinta lagu sheegey in Soomaalida lagu qiyaasay in ay dhantahay 12,316,895 (Labo iyo taban milyan, sedex boqol iyo lix iyo tobonkun, sideed boqol iyo 95 qof), kuwaasi oo boqolkiiba %74 ay yihiin dad da’doodu ay ka hooseyso 30 jir, halka %10 ay yihiin barokacayaal.
Meelaha laga qiyaas qaatay waxaa ka mid ah hawlaha samofalka, ceelasha biyaha, isbitaalada iyo goobaha dadka guud ee dadka isugu yimaadaan, balse tirakoobkani waa mid qiyaas ku dhisan oo aanan hubanti ahayn in uu saxanyahay.
Dadka reer magaalka ah ayaa la sheegay inay tiradooda gaarayso 5, 216, 392 taas oo ah 42%. Reer Guuraaga ayaa wrabixintu sheegaysaa in ay tiradoodu gaarayso 3, 186, 965 taas oo ka dhigan in ay wadarta guud ka yihiin 26%, halka ay warbixintu sheegtay in Beeralayda Soomaaliya ay tiradooda gaarayso 2, 805, 787 qofood oo ka dhigan 23%. Barakacayaasha ayaa warbixintu xustay in ay 1, 100, 000 kor u dhaafayaan taas oo ah 9%. Waxyaabaha la yaabka leh ayaa waxaa kamid ah in Banaadir kadib uu gobolka ay barakacayaashu ugu badanyihiin uu yahay gobolka Galguduud oo ay ku xigaan Shabeelaha Hoose, Gedo iyo Mudug.
Tira koobkan ayaa sidoo kale muujinaya inta dhedig ah iyo inta labka ah. Tusaale ahaan waxay warbixintu tiri reer magaalka in ay isla egyihiin raga iyo dumarka halka beeralayda 49% ay dumar yihiin halka 51% ay rag yihiin. Reer Guuraaga waxaa ay ka ag dhawyihiin Beeralayda oo wali tirada ragga ayaa ka sarreyso midda dumarka oo ah 52%. Laakiin tira koob kaa ka duwan waa midka laga sameeyay Barakacayaasha oo muujinaya in dumarku ay gaarayaan 51% halka ragguna ka yihiin 49%.
Waxaayabaha kale ee xussida mudan ee tirakoobkan lagu soo bandhigay ee lama filaanka ah ayaa waxa kamid ah sida gobollada u kala dad badanyihiin. Tusaale ahaan Gobolaka Banaadir ayaa tira koobku sheegayaa inay ku noolyihiin 1, 650, 227 taas oo ka dhigaysa in 13.4% ay ka yihiin tirada guud ee Soomaaliya. Gobolka Waqooyi Galbeed ayaa ku xiga oo ay ku noolyihiin 1,242, 003 taas oo ka dhigan 10.1%. Gobolka Shabellaha Hoose ayaa ku xiga oo ay warbixintu sheegtay inay ku noolyihiin 1, 202,219 taas oo ah 9.8%. Gobolka Bay ayaa isagana lagu sheegay in dadka ku nool tira ahaan gaarayaan 792, 182 taas oo ah 6.45% wadarta guud. Gobolka Togdheer ayaa isagana dadkiisu gaarayaan 721,363. Sidoo kale Gobolka Bari oo ah kan ugu baaxadda wayn gobollada dalka dhul ahaan ayaa tirada dadka ku nool lagu sheegay 719, 512 taas oo ka ah wadarta guud 5.8%. Gobolka Mudug ayaa la sheegay inay ku noolyihiin dad gaaraya 717, 863. Awdal ayaa dadkuusi gaaranayaan 673, 263. Galgaduud ayaa iyana ah 569, 434 oo 4.65% ka ah wadarta guud. Hiiran ayay warbixintu ku tilmaantay inay tirade gobolkaas gaarayso 520, 585 oo macnaheedu yahay in 4.2%. Gobolka Gedo ayaa tira koobka sheegayaa inuu yahay 508,405 oo ah 4.1%. Jubada Dhexe ayaa lagu sheegay 362, 921 oo 2.9% tirade guud.
Hadaba hoos ka akhri sida loo kala qiyaasey dadka iyo gobolada
Shabeelada Dhexe 516036
Shabeelade Hoose 1202219
Jubada Dhexe 362921
Jubada Hoose 489307
Tirada guud 12,316 895
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Oo Gaaray Magaalada Kismaayo
Boqor Burhaan Boqor Muuse oo Yimid Muqdisho, Lana Kulmey Ra'isulwasaaraha
Maxamed Cumar Carte "Waxaa Loo Baahanyahay Dib U Habeyn Maareynta Maaliyadda"
Kaydka Goobjoog Select Month August 2021 (18) July 2021 (150) June 2021 (128) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)